China 48V500W 12T Controller Kugadzira uye Fekitori | LEEK
48V500W 12T Mutungamiriri
Rondedzero Item Zita: 48V650W 12Tube Anodzora Pasi pemagetsi: 41.5V （± 0.5V, Yazvino: 31A (± 1A) Saizi: 26.5 CM * 13.5CM * 5.5CM (Bhokisi saizi) Kushandisa: Yeye pedal rickshaw mota kit Yakakwira-frequency switching uye Ultra-yakaderera voltage madonhwe inopa kwakanyanya kushanda uye chinyararire mashandiro. Kuwedzera kuri nyore uye wiring ine Push-on zvinongedzo zvemasimba ekudzora uye akafukidza mabhazi emhangura akasimba ekubatanidza magetsi. Inoenderana neyese-maviri waya potentiometer kana nemhepo kuputika. Throttle mhosva ...
Item Zita: 48V650W 12Tube Mutungamiriri
Pasi pemagetsi: 41.5V（±0.5V）
Izvozvi: 31A (±1A)
Saizi: 26.5 CM * 13.5CM * 5.5CM (Bhokisi saizi)
Usage: Yeye pedal rickshaw mota kit
Yakakwira-frequency switching uye Ultra-yakaderera voltage madonhwe inopa kwakanyanya kushanda uye kwakanyarara kushanda.
Kuwedzera kuri nyore uye wiring ine Push-on zvinongedzo zvemasimba ekudzora uye akafukidza mabhazi emhangura akasimba ekubatanidza magetsi.
Inoenderana neyese-maviri waya potentiometer kana nemhepo kuputika.
Throttle mhosva inodzivirira matunhu inoremadza mutungamiriri kana waya dzekubaya dzikavhurika.
Yakakwira pedal inodzivirira chimiro inodzivirira mashandiro ekushanda kana kiyi yakavhurwa nepo throttle ichiiswa.
Plug braking diode yemukati kune controller.
Kuchengetedzwa kwemafuta uye muripo wedunhu inopa inogara iripo muganho wazvino pamusoro pekushanda renji uye panguva yepasi / pamusoro pekupisa tembiricha; hapana kurasikirwa kwesimba kamwe kamwe pasi pechero mamiriro ekupisa.
Pasi pemagetsi ekucheka basa rinodzivirira yakaderera bhatiri voltage, kusanganisira yakaderera magetsi inokonzerwa nevekunze mitoro.
Inogadziriswa nyore nyore kuburikidza neCURTIS Model 1313-4331 Ruoko-rwakabatwa Nyanzvi kana 1314 PC Chirongwa Chiteshi.
Yakaomeswa anodized aruminiyamu extruded dzimba inosangana neP65 yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zviyero zvekushandisa munzvimbo dzakaomarara.
Kurongedza kweCKD kwakazara nekatoni uye kurongedza kweSKD kunowanzo kurongedzwa nehuni kana simbi furemu. Kana paine chero zvakakosha zvinodiwa, ndokumbira utaure nemunhu wedu wekutengesa.
Dhipatimendi reR & D: Tine timu yakasimba yeR & D ine makore mazhinji echiitiko munzvimbo dzakaita semagetsi, zvemagetsi, software, michina, michina, nezvimwe.
2.Production Center: Iyo yakazara seti yekugadzirisa michina inogona kuvimbisa iko kururamisa; Yepamberi otomatiki waya yekumisikidza sisitimu ndeyekuona kusagadzikana; Semi-otomatiki yekugadzira mutsara ichavandudza kugadzirwa.
3.Motor Kugadzira: Semi-otomatiki yekugadzira mutsara: inopfuura 80% otomatiki; Makumi makumi matanhatu anoita seti imwe chete; kugadzirwa kwegore negore: 15,000; max. kugadzirwa kwegore: 45,000 seti
4.Controller Kugadzira: Semi-otomatiki controller yekugadzira mutsara: inopfuura 80% otomatiki; Zvikamu zana mukuchinja kumwe chete
5.Quality Management: Dhipatimendi reruvimbiso remhando inozotarisira maitiro ekugadzira uye chishandiso chekuyedza chinogona kusimbisa chigadzirwa chemhando.
Pashure: 48V750W 15T Mutungamiriri
Zvadaro: Chitiviri Rickshaw Motor Kit
E Bhasikoro Kukanya, Chiedza Bhuruu Midhudhudhu, Kufambisa Pane Bhasikoro, 22.5 Mavhiri Evhiri, Rutivi Mira Puck, Yakanakisa Lithium Midhudhudhu Battery Chaja,